Ny fianakaviana vaovao an'ny fitaovana Xperia Z5 dia azo jerena | Androidsis
Ny fianakaviana vaovao an'ny fitaovana Xperia Z5 dia azo jerena amin'ny sary
Manomboka amin'ny fomba ofisialy anio ny IFA, noho izany dia antenaina fa ho be andro be izao, mpanamboatra maro no miandry ity foara teknolojia farany ity hanambara ny vaovao farany alohan'ny faran'ny taona. Sony dia iray amin'ireo mpanamboatra izay tsy ho diso ny fanendrena any Berlin satria manana zavatra marobe aseho mandritra ny andro maharitra ny foara.
Ny orinasa Japoney angamba no fantatry ny mpanjifa vokatra elektronika indrindra, fa ity mpanamboatra ity koa dia fantatra amin'ny finday avo lenta. Ny iray amin'ireo laharam-pahamehana fanta-daza izay atolotra ho andian-tsarin'ny flagship dia ny Xperia Z.
Mandritra ny fotoam-pivoriana anio, antenaina fa ity orinasa monina any Japon ity dia hampiseho amin'ny mpanao gazety ny sainam-pireneny vaovao, ny Sony Xperia Z5 ary eo akaikiny, haseho ireo karazan-terminal isan-karazany, toy ny Xperia Z5 Compactianao sy izy Xperia Z5 PremiumIty farany no terminal eo amin'ny elanelana misy haben'ny efijery lehibe indrindra sy famahana 4K.
Nisy mpivady tafaporitsaka tato anatin'ny andro vitsivitsy. Tao amin'izy ireo no ahitantsika ny fijery ara-batana hananan'ny terminal japoney sy ny fitaovana hiorenany. Androany sy ora maro alohan'ny anehoana azy ireo eo amin'ny fiaraha-monina, dia atolotray anao ny sarin'ireo fitaovana Xperia Z5 vaovao, raha tsy misy ny fanamafisana ofisialy avy amin'i Sony.
Amin'ireto sary ireto dia ahitantsika ireo fanitsakitsahana kely amin'ny endriny momba ireo taranaka teo aloha. Ao amin'ny fizarana ara-batana dia vitsy ny zava-baovao, angamba ny sensor ny dian-tànana no zava-baovao lehibe indrindra. Na izany aza, antenaina fa eo amin'ny fitaovanao Sony dia nanao revolisiona hanavahana ny tenany amin'ireo fitaovana Android avo lenta hafa.
Amin'ireo sary hitantsika, ankoatry ny fahasamihafana eo amin'ny habeny eo amin'ireo fitaovana telo ireo, ny mpamaky ny rantsantanana, ny efi-trano lehibe an'ny 23 Megapixels mijanona ao ambadiky ny fitaovana sy ilay vaovao loko titanium miaraka amin'ny loko mainty mahazatra an'i Sony ao amin'ny faritra Xperia Z.Hatramin'izay dia izay no azontsika ambara momba ireo fitaovana Sony ho avy ireo.
Ankehitriny dia mila miandry adiny roa fotsiny isika amin'ny IFA any Berlin. Tsarovy fa ho eo amin'ny foara isika mba hahafahantsika mandrakotra ny zava-nitranga rehetra nandritra ireo andro ireo. Araho tsara hatrany ireo mombamomba ny media sosialinay hahitanao izay mitranga ao an-drenivohitra Alemanina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Sony » Ny fianakaviana vaovao an'ny fitaovana Xperia Z5 dia azo jerena amin'ny sary